Power Supply Power Supply, 50W 1200Ma Led Driver, Low Ripple Switch Power Supply to Your Requirements
Description:Fiarovana herinaratra,50W 1200Ma Led Driver,Fiatoana ambany,,,
Home > Products > Mpitsoa-ponenana ivelan&#39;ny trano > Mpanaingo an-tariby mitondra làlana
Ny vokatra avy amin'ny Mpanaingo an-tariby mitondra làlana , mpanofana manokana avy any Shina, Fiarovana herinaratra , 50W 1200Ma Led Driver mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Fiatoana ambany R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
LED Waterproof LED 55W 1800mA  Contact Now
277Vac 1.2A output current 36W LED driver  Contact Now
IP67 LED Tweeter 100W ho Light Street Street  Contact Now
Power transformer Dimmable Driver 100W  Contact Now
150W IP Rated Aluminum LED Driver 0-10V dimming  Contact Now
240W IP Rated Aluminum Driver 0-10V Dimming  Contact Now
Fiatoana ambaratongam-barotra LED Adjustable LED 240W.  Contact Now
Outdoor Led Lighting Driver Constant Current / Voltage  Contact Now
100W 54V Constant Current LED Treiber  Contact Now
Dimmable Aluminum Alloy IP Driver  Contact Now
Aluminium Housing LED Driver Constant Current  Contact Now
UL Street Lights LED Driver  Contact Now
Solon-dàlana Solosaina Street Light Outdoor  Contact Now
Power Supply 48v Waterproof Led Driver FD-36H-054B  Contact Now
Tondro-jotra LED High Efficiency LED  Contact Now
80W LED Street Lamp Supply Supply  Contact Now
Fiara LED Lighting Outdoor Lighting  Contact Now
24v Wall Lamp Street Light Power Driver Power Supply  Contact Now
LED Waterproof LED 55W 1800mA
Mombamomba ny vokatra FD-55H-42C , natao manokana ho an'ny jiro LED Street, tariby mitaingina lakolosy fanairana, hampiasana ny Solosaina Outdoor Outdoor Solution. IP67 mitambolimbolina, miaraka amin'ny 0-10V, PWM, RX mamay, mandalo ny UL...
277Vac 1.2A output current 36W LED driver
IP67 Waterproof 277V input 0.6-1.2A output current 36W LED driver with PWM Dimmable function Mombamomba ny vokatra LED driver endri-javatra Constant Current Design 3 amin'ny alàlan'ny fimailo 1: 0-10V / PWM / RX Fihetseham-po mahitsy...
IP67 LED Tweeter 100W ho Light Street Street
Mombamomba ny vokatra FD-100H-054 , natao manokana ho an'ny jiro LED Street, tariby mitarika labozia , mba hampiasana ny Solosaina Outdoor Outdoor. IP67 mitambolimbolina, miaraka amin'ny 0-10V, PWM, RX mamay, mandalo ny UL Certiication...
Power transformer Dimmable Driver 100W
150W IP Rated Aluminum LED Driver 0-10V dimming
Description: Ny laharana FD-160HxxxB dia miasa ao anatin'ny faritra 90 ~ 305 Vac. Ireo sokajy ireo dia hanome ny 3,8A amin'ny famoam-pitaovana ary ny laharana ambony indrindra amin'ny 54 V ho an'ny MA 160 mahery. Natao hahomby sy azo...
240W IP Rated Aluminum Driver 0-10V Dimming
Description: Ny laharana FD-240HxxxB dia miasa amin'ny alàlan'ny sariohatra 90 ~ 305 Vac. Ireo sokajy ireo dia manome hatramin'ny 7.5A ny famoam-pitaovana ary ny isam-bolana farafahakeliny 40 V ho an'ny herinaratra ambony 240 W....
Outdoor Led Lighting Driver Constant Current / Voltage
Description: Ny seranana FD-36H-xxxB dia miasa amin'ny dinidinan'ny 90 ~ 305 Vac. Ireo sokajy ireo dia manome ny 0.9A ny famoam-pitaovana ary ny dingana avo indrindra amin'ny 115 V ho an'ny hery lehibe indrindra herinaratra 36 W....
100W 54V Constant Current LED Treiber
Description: Ny seranana FD-100H-xxxB dia miasa amin'ny sariohatra 90 ~ 305 Vac. Ireo sokajy ireo dia hanome ny 3,8A amin'ny famoam-peo ary ny laharana ambony indrindra amin'ny 54 V ho an'ny herinaratra ambony 100 W. Natao hahomby sy...
Dimmable Aluminum Alloy IP Driver
Description: Ny seranana FD-160H-xxxB dia miasa amin'ny alàlan'ny sariohatra 90 ~ 305 Vac. Ireo sokajy ireo dia hanome ny 4,4A amin'ny famoam-pitaovana ary ny isam-bolana farany indrindra amin'ny 42 V ho an'ny hery mihoatra ny...
Aluminium Housing LED Driver Constant Current
Details FD-160H-054B , Fanamafisana herinaratra tsy tapaka, Natao ho an'ny fampihetseham-panaon'ny jiro. Flicker maimaim-poana 160W 5000mA, miaraka amin'ny UL, FCC, RCM, CB, CE mifanaraka, vokatra fantsoratry ny IP67 amin'ny endriny...
Solon-dàlana Solosaina Street Light Outdoor
Details Fahilina LED Street Lights Ny mpandeha dia fahazavana mahomby amin'ny fampifangaroana ny fatiantoka amin'ny vidiny amin'ny fanadiovana madio. Izy io dia manolotra mpanjifa ny tombontsoa rehetra azo avy amin'ny tariby LED -...
Tondro-jotra LED High Efficiency LED
80W LED Street Lamp Supply Supply
Fiara LED Lighting Outdoor Lighting
24v Wall Lamp Street Light Power Driver Power Supply
Shina Mpanaingo an-tariby mitondra làlana mpamatsy
Miaraka amin'ny fenitra famokarana maneran-tany sy ny fanamafisana isan-karazany, toy ny CE, UL, FCC, TUV ary SAA, dia mivarotra tsena ao an-tokantrano ny vokatra mitondra antsika. Manolotra vahaolana isan-karazany LED lampea solosaina izay misy ny LED Street Lighting na System, LED Lams, LED linear sns. Amin'izay fotoana izay, mitahiry angovo sy mameno ny hatsaran-tarehim-piainan'ny asa fiasan-tsika amin'ny famolavolantsika ny fametahana herinaratra! Ny tanjom-pamokarana angona angon-dian-tsika manara-penitra LED dia manolotra rano avy any amin'ny 100mA hatramin'ny 8000mA; raha manomboka amin'ny 12V mandeha ny 48V ny Power Lighting Power Supply Lighting. Ny karazan-jiro LED manjelanjelatra dia manome fahaiza-manao mahomby, PFC, misy amin'ny Class P Input; Fanomboana IP manohitra ny vovoka sy ny hafanana avy amin'ny IP20 ka hatramin'ny IP67 ary fiarovana amin'ny faritra fohy, mihoatra ny fifanoherana, ny fivoahana sy ny toetrandro. Miaraka amin'ny safidy fanampiny ireo output outputs sy PWM, 1-10V, Resistive na triac dimming functions.
Fiarovana herinaratra 50W 1200Ma Led Driver Fiatoana ambany